Project Stream - ဂူဂဲလ်၏ဂိမ်း streaming ၀ န်ဆောင်မှုသည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်
Project Stream - ဂူဂဲလ်၏ဂိမ်း streaming ၀ န်ဆောင်မှုသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ တရား ၀ င်တင်ပြထားသောကုမ္ပဏီ၏စီမံကိန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HMD Global မှအောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်လွှတ်တင်မည့်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်စတင်လွှတ်တင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း HMD Global မှဖော်ပြခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင်အသစ်များ - အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဘတ်စ်ကားနှင့်ရထားအနေအထားနှင့်ရောနှောထားသောစနစ်ဖြင့်ခရီးသွားခြင်း
ယခုအပတ်တွင်ဂူဂဲလ်မြေပုံများတွင်အင်္ဂါရပ်အသစ် ၄ ခုရှိသည်။ ဂီတထိန်းချုပ်မှုများ၊ အသွားအလာအဖြစ်အပျက်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားတည်နေရာနှင့်ရောနှောသောခရီးများ။
iOS ပေါ်မှ default search engine ဖြစ်သည့်အတွက် Google ကယခုနှစ်တွင် Apple အားဒေါ်လာ ၉၀၀၀ ပေးရမည်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုပဲ၊ Google ကို Apple ကိုပုံမှန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဟာသိသိသာသာတိုးပွားလာတယ်။
အခြားမည်သူမဆိုရှေ့တွင် OnePlus 6T ကိုစမ်းကြည့်ပါ
အခြားမည်သူ့ကိုမဆိုသင့်အိမ်တွင်အခမဲ့ယူနစ်ကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်ဤ OnePlus 6T စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်မည်ကိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy A6s: TENAA တွင်ပေါက်ကြားမှု
Samsung Galaxy A6s များကို TENAA တွင်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါတို့အဘို့အကုမ္ပဏီပြင်ဆင်ထားသောအရာကိုထွက်ရှာပါ။
လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် Facebook အကောင့်သန်း ၅၀ နီးပါးအန္တရာယ်ရှိနိုင်
Facebook လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကြောင့်သုံးစွဲသူအကောင့်သန်း ၅၀ ခန့်အန္တရာယ်ရှိ
SwiftKey တွင် Microsoft ၏ Instant Translator ကိုအသုံးပြုနည်း - ကီးဘုတ်အက်ပ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြည့်စွက်ခြင်း
SwiftKey သည်မူကွဲအသစ်မှမည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဘာသာပြန်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် Microsoft ဘာသာပြန်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒါက Razer ဖုန်းနံပါတ်2ပါဘဲ
Oppo Find X သည် 10 GB RAM ပါသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
တရုတ်ဈေးကွက်သည် ၁၀ GB GB RAM ပါရှိသည့် Oppo Find X ၏အထူးဗားရှင်းရရှိရန်ပြင်ဆင်နေသည်
ယခုတွင်သင်သည် Google Maps ၏ကြယ်ပွင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ဖြင့်ညစာသို့မဟုတ်နေ့လည်စာသို့သွားမည့်အုပ်စုတွင်စီစဉ်နိုင်သည်။ link တစ်ခုမျှဝေသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။
Pixel3XL ၏ကင်မရာမျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ခံပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
Pixel3XL ၏နောက်ခံပုံများနှင့်ကင်မရာမျက်နှာပြင်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ဂူးဂဲလ်၏ဖုန်းအသစ်ပေါက်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
လွမ်းဆွတ်မှုအတွက် SEGA ၏ Streets of Rage2သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်များကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်အခြားနှစ်များသို့ပြန်သွားရန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် WhatsApp ကိုပိတ်ဆို့ရန်စီစဉ်နေ
WhatsApp ကိုအိန္ဒိယတွင်လုံးဝပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ အသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သောအာရှနိုင်ငံတွင်းရှိလျှောက်လွှာ၏ပြtheနာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
WhatsApp မှအွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများကို Android Pie ဇာတိသတိပေးချက်များတွင်ထည့်သည်
အမှားအယွင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအတွက် Android ကဒေါ်လာ ၃ သန်းပေးခဲ့သည်
လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် Android ကဒေါ်လာ ၃ သန်းတန်ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဆုလာဘ်များအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Tinder လို Facebook မှာသူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းအသစ်တွေကိုသင်ရပြီ
Facebook Dating သည်သင်၏မြို့တော်ရှိလူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် Tinder ကဲ့သို့သောလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သည်။
Android အော်ပရေတာဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းသည် Android အော်ပရေတာကိုထောက်ပံ့ရန်အသစ်ပြောင်းခဲ့သည်။
Renault, Nissan နှင့် Mitsubishi တို့သည်သူတို့၏ကားများအတွက် Android ကို သုံး၍ ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံး Renault ကားကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်စက်ရုံမှ Android ပါဝင်သည်။ ဂူဂဲလ်မြေပုံများ၊ လက်ထောက်နှင့်များစွာသောအခြားအက်ပ်များ။
Gaël Duvan ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သော Eelo က Android အခြေပြုလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဂူးဂဲလ်မရှိဘဲဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြသသည်
၇ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီးစမတ်ကျသည့်စပီကာကို Google Home Hub ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည်
Google သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစပီကာကို ၇ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Pepephone ၏ 200 Mb Fiber Rate ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ယခု Movistar လွှမ်းခြုံမှုရှိသောဤနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
အိုင်ဖုန်းနှင့်အိုင်ပက်ဒ်အားလုံးပြိုကွဲစေသော CSS ကုဒ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
WhatsApp သည်မှောင်မိုက်သော mode ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သည်
WhatsApp ကမှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုမကြာခင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ လူကြိုက်များသောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်သို့အမှောင်မုဒ်ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
PUBG Mobile သည်လတ်တလောလိုအပ်သည့်မိုဘိုင်းဂိမ်းတွင်လစဉ်တက်ကြွသောကစားသမားသန်း ၂၀ နှင့်အတူပြိုကွဲနေသည်
Huawei ဗီဒီယို၊ Huawei ထုတ်ကုန်များအတွက်အပေါင်းတစ်ခု
လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့် Multimedia Content ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော Huawei Video သည် Huawei စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ကြေးပေးသွင်းမှုဖြင့်စပိန်သို့ရောက်ရှိသည်
HTC သည်၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းသည် 5G ဖြစ်ပြီး Snapdragon 855 ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်
မကြာသေးမီကကောလာဟလများအရ HTC သည်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည် 5G ဖုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤအချက်အလက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဓာတ်ပုံများနှင့် SMS များကို Windows 10 'Insider Preview' ပရိုဂရမ်မှ Android နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
အဓိက Windows 10 မွမ်းမံမှု၏နောက်ဆုံးမူကွဲတွင်ပါ ၀ င်သောသင်၏ Microsoft အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ ဓာတ်ပုံများနှင့် SMS များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။
Android 9.0 Pie သည် Sony DualShock4နှင့် Xbox One gamepad နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Android 9.0 Pie သည် DualShock4နှင့် Xbox One gamepad နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ operating system အတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းကိုလေ့လာပါ။
MediaTek သည် 5G ကိုအနိမ့်ဆုံးသို့ယူဆောင်လာမည်
MediaTek သည် 5G ကိုနိမ့်ကျအောင်လုပ်ဆောင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤနည်းပညာကို Android တွင်တပ်ဆင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကားကောင်းသောဆက်သွယ်မှုကိုခံစားရန်သင်ရှောင်ကြဉ်ရမည် Wifi ၏ရန်သူငါးယောက်ဖြစ်ကြသည်
ကောင်းမွန်သော Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုမျိုးကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာအတွက်သင်ရှောင်ကြဉ်ရမည့် "အတားအဆီး" များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စမတ်ဖုန်းများမည်ကဲ့သို့ဖြန့်ဝေသည်ကို၎င်းတို့၏ထူးခြားချက်များနှင့်အညီဖော်ပြပေးသောအချက်အလက်များစွာကို AnTuTu ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Nokia9၏ rendering အသစ်သည် screen ကို notch ဖြင့်ဖော်ပြသည်
Nokia9သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကင်မရာငါးလုံးပါ ၀ င်သည့်ဖုန်း၏ရှေ့နှင့်အနောက်ကိုပြသသည့်ပြန်ဆိုချက်တစ်ခုတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Google Pixel3ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်နယူးယောက်မြို့၌ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
Google သည်အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်နယူးယောက်ရှိ Google Pixel3ကိုမိတ်ဆက်မည်။ ဖုန်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor Band 4, AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု
မင်းတို့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကို ၆ ရက်အထိမနှောင့်ယှက်ဘဲစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ Honor Band4ရဲ့စမတ်တီးဝိုင်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။
အကြမ်းခံသောဖုန်းများသည်၎င်းကို Android Enterprise အကြံပြုထားသည်
Android Enterprise အကြံပြုထားတဲ့ပရိုဂရမ်ကကြမ်းတမ်းတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ စီးပွားရေးအစီအစဉ်သို့လာသည့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Razer က၎င်းသည် Razer ဖုန်း၏ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းအတည်ပြုသည်
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကကျွန်ုပ်တို့သည်ကောလဟလများနှင့် ပက်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် Razer ကုမ္ပဏီသည်ဒုတိယမျိုးဆက် Razer ဖုန်းကိုဂိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူရှေ့တွင်တင်ပြနိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် Razer ဖုန်း၏ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
WhatsApp ၏ beta သည်ဗားရှင်း ၂.၁၁.၂၇၁ တွင်အသံမှတ်စုများပြproblemsနာများကိုပေးသည်
WhatsApp ၏ beta ကို 2.18.271 အသံမှတ်စုများဖွင့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ များစွာသောသူတို့အံ့အားသင့်စေဖို့သူတို့ပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့က app ကိုပိတ်လိုက်တယ်။
IG Shopping သည် Instagram ကိုဝယ်ယူရန်သီးသန့် app တစ်ခုတီထွင်နေသည်
IG Shopping သည်ဈေးဝယ်ရန်အထူးသီးသန့် Instagram app တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ယခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစတိုးဆိုင်များမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
အမေဇုံချုပ် ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၈၀% တက်မည်
အမေဇုံက ၀ ယ်ယူသူရဲ့စျေးနှုန်းကိုတစ်နှစ်ကိုယူရို ၃၆ ကနေ ၈၀% အထိတိုးမြှင့်လိုက်တယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေဆဲလား။
Honor 7S ကိုမနက်ဖြန်တွင်အိန္ဒိယတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချမည်
မနက်ဖြန်အိန္ဒိယတွင် Honor 7S ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချမည်။ ဤကြေငြာထားသောစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည့်ကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
POPTEL P9000 MAX ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကြမ်းတမ်းသော POPTEL P9000 MAX၊ IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ၉၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
စျေးပေါတဲ့ Google Pixel ကိုအိန္ဒိယမှာရောင်းချမယ်
Google ကဈေးသက်သာတဲ့ Pixel ကိုအိန္ဒိယလိုစျေးကွက်တွေမှာဖြန့်ချိမယ်။ အောက်တိုဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သောဤစျေးပေါသော Pixel ၏စတင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi မှဓာတ်ပုံတစ်ခုတွင် Mi MIX3ကို 5G ဆက်သွယ်မှုဖြင့်လူတိုင်းအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်
4G ကွန်ယက်သည်အနည်းငယ်သာသိပါကစျေးကွက်တွင်ရှိသည့် Xiaomi Mi MIX3ကိုသင်ဝယ်ယူပါက 5G အမြန်နှုန်းကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကမေ့နေသော Pixel3Xl ကိုကားထဲတွင်ထားခဲ့သည်
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏ Google Pixel3XL ကိုကားထဲတွင်မေ့သွားသည် ဖုန်းဒီဇိုင်းကိုသိသည့်ဤပုံပြင်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sharp သည်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်သုံးမျိုးကိုဥရောပအတွက်ပေးခဲ့သည်။ ဥရောပ၌ဖြန့်ချိမည့်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
တရားဝင်: Huawei သည်အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင်လန်ဒန်တွင် Mate 20 ကိုတင်ဆက်မည်
Huawei သည် Mate 20 နှင့် Mate 20 Pro တို့ကိုအောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင်လန်ဒန်၌ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့အဘို့အကုမ္ပဏီပြင်ဆင်ထားသောအရာကိုထွက်ရှာပါ။
Mbuynow ကျောပိုးအိတ်၊ USB နှင့်နားကြပ် port ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင်၏ Laptop ကိုသယ်ဆောင်ရန်အလွန်ခေတ်မီကျောပိုးအိတ်ဖြစ်သော Mbuynow ကျောပိုးအိတ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအားသွင်းနိုင်ပြီးသင်၏နားကြပ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Wiko Harry2နှင့် Wiko View2Plus တို့၏ IFA တွင်ပြသထားသောပြင်သစ် Android ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောနေ့ဖြစ်သည်။
Vivo X23 ဟာ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီဖြစ်ပြီး noas ကသူ့ရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်အက်ပဲလ်က iPhone နှင့် Apple Watch တို့၏မျိုးဆက်သစ်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်
ရက်ပေါင်းများစွာကောလဟလများနှင့်ထင်ကြေးများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မီဒီယာသို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုပေးပို့လိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်အက်ပဲလ်က iPhone မျိုးဆက်သစ်ကိုနှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းနေသည့်ဒီဇိုင်း၏အသစ်ပြန်လည်နှင့်အတူတင်ဆက်လိမ့်မည်။ Apple Watch
Pocophone F1 တွင် Netflix HD ဗီဒီယိုများကိုမဖွင့်နိုင်ပါ
Pocophone F1 သည် HD ဗီဒီယိုများကို Netflix တွင်မဖွင့်နိုင်ပါ။ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ခန့်ကထုတ်ဖော်ခဲ့သောဤသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Wiko View2Go - notch နှင့် ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အကွာအဝေး
Wiko View2Go: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ IFA 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်နိမ့်နိမိတ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi Mix3၏ပထမဆုံးပုံရိပ်သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi Mix 3. ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရောက်ရှိလာသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
POCO Launcher ၏ APK ကိုယခု download ဆွဲပါ။ ၎င်းသည် "နည်းနည်းလေး" လိုအရသာရှိတဲ့ app launcher တစ်ခုပါ။
ယနေ့အိန္ဒိယတွင်စတင်ခဲ့သော Pocophone F1 အက်ပလီကေးရှင်း POCO Launcher အကြောင်းအနည်းငယ်သာပြောနိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာအပေါ်မှီခို။
စပိန်အတွက် Honor Play ၏ဈေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကို Honor မှကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီမကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo X23 ကိုအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်
အရောင်သုံးမျိုးဖြင့် Vivo X23 သည်စတိုးဆိုင်များကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ ဖုန်းတွင်စတင်မည့်အရောင်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Vivo V11 Pro ကိုကုမ္ပဏီ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မထုတ်ပြန်မီကဖော်ပြခဲ့သည်
Vivo V11 Pro ကိုစက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းမတိုင်မီကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
သြဂုတ်လအစတွင် Apple နှင့် Huawei တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏တရားဝင်ဟန်းဆက်ရောင်းအားကိုဒုတိယသုံးလပတ်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။
OUKITEL K8 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
OUKITEL K8 ကို ၆ လက်မဖန်သားပြင်တပ်ဆင်ထားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည့်ကင်မရာနှစ်လုံးကိုယူရို ၁၅၀ အောက်ဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တန်ဖိုးရှိလား
Samsung သည် Galaxy S9 ကို Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းများကိုလျင်မြန်စွာအဆင့်မြှင့်တင်သည့်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို Android Pie သို့အမြန်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်လိုသည်၊ အနည်းဆုံးတော့ Galaxy S9 ။
Smartisan Nut Pro 2S ကို ၆.၀၁ လက်မဖန်သားပြင်၊ Snapdragon 6.01 နှင့်အခြားအရာများထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Smartisan Nut Pro 2S သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Qualcomm ၏ Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ကိုလေ့လာပါ။
Honor 8X Max ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Honor 8X Max ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo သည် X5 modem ဖြင့်ပြုပြင်ထားသော Oppo R15 တွင် 50G ကွန်ယက်ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ခဲ့သည်
Oppo သည် Qualcomm X5 modem ဖြင့်ပြုပြင်ထားသော Oppo R15 ဖုန်းတွင် 50G စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Sony သည် IFA 2018. တွင်တရားဝင်ဖုန်းများကိုတရားဝင်တင်ဆက်ပြသလိမ့်မည်။ IFA ၌ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏ကြေငြာချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Nubia Z18 ကိုလာမည့်စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်ရှိ IFA တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Realme2သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်၏စျေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်း
Realme2ကိုအိန္ဒိယတွင် Snapdragon 450 SoC ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်သည်။ ကုမ္ပဏီမှစျေးသိပ်မကြီးသည့်ကိရိယာအသစ်အကြောင်းလေ့လာပါ။
Custom ROMs နှင့်အတူ Huawei အသုံးပြုသူများသည်တရားဝင် ROM သို့အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့သည်
Huawei သည် Custom ROM များရှိသောအသုံးပြုသူများကိုမူရင်းသို့ပြန်သွားသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆိုင်သောအသုံးပြုသူပြproblemsနာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
TSMC သည် Qualcomm ၏ Snapdragon 855 ကိုလာမည့်သုံးလပတ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်မည်
ထိုင်ဝမ်၏ဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီက SD845 ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော Snapdragon 855 ကိုလာမည့်နှင့်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်ထုတ်လုပ်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Google Pixel3ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Google Pixel3ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင်တင်ပြမည်။ ဂူဂဲလ်ဖုန်းအသစ်များဖြန့်ချိသည့်နေ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်ယခုစပိန်နိုင်ငံရှိ Oppo Find X ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်
Oppo Find X ကိုစပိန်ရှိအွန်လိုင်းစတိုးသုံးခုဖြစ်သော Media Markt, FNAC နှင့် El Corte Inglésတို့တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားပြီဖြစ်သည်။
Huawei Mate 20 Lite ကိုယခုရောင်းချနေသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
Huawei Mate 20 Lite ကိုပိုလန်နိုင်ငံမှအွန်လိုင်းစတိုးတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းကိုသိ!
တရားဝင် Facebook အက်ပလီကေးရှင်းသည်ယခုအခါအန်းဒရွိုက်အသိပေးကြေငြာခြင်းလမ်းကြောင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
Android 8.0 Oreo ဗားရှင်းမှသင် Facebook အက်ပလီကေးရှင်းရှိသတိပေးချက်လိုင်းများကိုယခုသုံးနိုင်သည်။ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုလုံးရောက်ရှိခြင်း။
Galaxy S10 မှာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ fingerprint sensor တစ်ခုပါရှိပါတယ်
Galaxy S10 သုံးလုံးစလုံးတွင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် fingerprint sensor ရှိသည်။ Samsung ၏ high-end အသစ်၏ဘုံအင်္ဂါရပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
AGM X3 သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
AGM X3 သည်၎င်း၏ပုံရိပ်များနှင့်နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စမတ်ဖုန်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
Honor 8X Max ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Honor 8X Max: ပထမအချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vodafone Smart N9 Lite - Android 8.1 Go မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရနိုင်သည်
Vodafone သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Smart N9 Lite ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ Android 8.1 Go ဖြင့်ဖုန်းအသစ်နှင့်ပါတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
Motorola One ပါဝါလုံးလုံးပေါက်နေပြီ
Motorola One Power ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုစစ်ထုတ်သည်။ Android One နဲ့ပထမဆုံး Motorola ဖုန်းအကြောင်းအားလုံးရှာဖွေပါ။
လွှတ်တင်ပြီးသုံးရက်အကြာတွင် Realme2၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
နောက်ထပ် Realme terminal ဖြစ်သော Realme2သည်လုံးဝပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အားလုံး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM ကဲ့သို့သော ZTE Axon9Pro ၏အချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို Geekbench မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
သြစတြေးလျအစိုးရသည် Huawei နှင့် ZTE တို့အား 5G ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ဒီကန့်သတ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိ။
Oppo သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Oppo သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G စမတ်ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဤစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Shaq Fu: ဒဏ္endာရီမှပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခြင်းကသင့်အား NBA ကြယ်ပွင့်ala "Double Dragon" ကဲ့သို့စေသည်
Shaq Fu: Legend Reborn သည် Double Dragon မှကျန်ရစ်ခဲ့သောအမွေအကြောင်းသတိပေးရန် Arcade ကိုယ်ခံပညာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမတိုင်မီသင့်အားနေရာချသည်။
Realme2ကိုသြဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Realme2ကိုအိန္ဒိယသို့သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချမည်။ ဒီလာမယ့်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံးကိုရှာဖွေ!
Honor 8X နှင့် 8X Max ၏တင်ဆက်မှုကိုစက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်
Honor သည် 8X Max နှင့် 8X Max တို့၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Galaxy Note9ရှိ Bixby ခလုတ်ကိုသင်မပိတ်နိုင်ပါ။ ဤအငြင်းပွားဖွယ် Samsung ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Snapdragon 855 ကိုယခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်
Snapdragon 855 ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်မည်။ Qualcomm ၏ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei ၏နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်က Kirin 980 ကိုသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်
Huawei သည် HiSilicon Kirin 980 ကိုဂျာမနီ၊ ဘာလင်ရှိ IFA တွင်သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့အဘို့အကုမ္ပဏီအတွက်စတိုးဆိုင်၌အဘယ်သို့ဆိုင်ထွက်ရှာပါ!
Wiko Sunny3 နှင့် Sunny3 Mini: Android Go နှင့်အတူနိမ့်ကျသောအဆင့်ရှိသည်
Wiko Sunny3 နှင့် Sunny3 Mini: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ဒီအဆင့်နိမ့်နိမ့်နိမ့်အကြောင်းကို Android Go ကို operating system အဖြစ်လေ့လာပါ။
OPPO R17 Pro: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထင်ရှားသောအသစ်
OPPO R17 Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ ဒီနေ့မိတ်ဆက်လိုက်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
HTC သည်လာမည့်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါက U30 Life လား?
HTC သည်လာမည့်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင်စတင်ဖြန့်ချိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် HTC U30 Life ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Doogee S70: စျေးကွက်ထဲတွင်ပထမဆုံးကြမ်းတမ်းသည့်ဂိမ်းဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Doogee S70 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးကြမ်းတမ်းတဲ့ဂိမ်းမိုဘိုင်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
Google ၏ Pixel3XL အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - Google Assistant ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များ
Google Pixel3XL သည်မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏နားကြပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလာပါပြီ။
Motorola RAZR - ဒါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ခေါက်သိမ်းထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်
RAZR အမည်အောက်တွင်ရှိသော Motorola ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ retro ပုံစံနှင့်ခေါက်နိုင်သောဖုန်း။
Xiaomi သည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်စမတ်ဖုန်း ၃၂ သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများရောင်းချခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE Axon9Pro ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယခုလတွင်ရောက်ရှိလာသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းသစ်ပါ ၀ င်မည့်ဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေပါ။
Vivo X23 ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ပထမဆုံးကြေငြာချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Pixel3XL နှင့်ပထမဆုံးရိုက်ယူခဲ့သောဓာတ်ပုံများ
Google ဖုန်းအသစ်၏အရည်အသွေးကိုပြသရန် Pixel3XL နှင့်ဓာတ်ပုံအများအပြား၏ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Nokia X7 ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံကိုစစ်ထုတ်သည်
Nokia X7 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာ ပထမဆုံးပုံရိပ်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
Samsung သည်ဥရောပအတွက်ဖုန်းငါးလုံးကိုထုတ်လုပ်နေသည်။ ဥရောပ၌ကုမ္ပဏီ၏လာမည့်ပစ်လွှတ်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei မှ Android Pie ကို အခြေခံ၍ EMUI 9.0 ကို IFA 2018 တွင်တင်ပြမည်
Android Pie ကိုအခြေခံသော EMUI 9.0 ကို IFA 2018. တွင်တင်ပြလိမ့်မည်။ Huawei ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏မူကွဲအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia 6.1 Plus နှင့် Nokia 5.1 Plus - အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Nokia 6.1 Plus နှင့် 5.1 Plus: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ Nokia မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းနှစ်လုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံနှင့်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းရန်အတွက် Google Fit ကိုလုံးဝအသစ်တဖန်ပြန်လည်ထားသည်
Google Fit မွမ်းမံမှုအသစ်ကသင်၏မြည်းကိုအိပ်ရာပေါ်မှဖယ်ထုတ်ပြီးအနည်းဆုံးနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ရန်လိုသည်။ အားလုံးသင်၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်။
နောက်မှ Instagram မှလာသည် - တိုက်ရိုက်စာတို့မှအသံမှတ်စုများ